Neymar Jr Oo Xakameyn Waayay Dareenkiisa, Kadib Markii Wax Laga Weydiiyay Wararka Ku Aadan Inuu Ku Biiri Doono Real Madrid, Kadib Kulankii Celtic. – WWW.Gool24.net
Laacibka ree Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain Neymar Jr ayaa qosol kaga baxay wararka ku aadan inuu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid, taasoo xitaa lumisay inuu xakameeyo dareenkiisa, kadib mar ay saxaafada wax ka weydiisay arintan marka uu soo idlaaday kulankii ay xasuuqa ba’an u geysteen kooxda Celtic.
Neymar Jr ayaa kooxdiisa Paris Saint-Germain ka sameeyay bandhig cajiib ah kulankii xalay wuxuuna ka caawiyay inay guul 7-1 kaga gaadhaan Celtic, kadib markii uu dhaliyay 2 gool isla markaana uu ka qeyb qaatay 1 gool kale uu dhaliyay saaxiibkii Edison Cavani oo isaguna dhaliyay 2 gool kale.
Laacibka ree Brazil ayaa xaqiijiyay khilaafka kala dhexeeyo tababaraha kooxda PSG Unai Emery, sidoo kale saaxiibkiis Edison Cavani iyo wararka ku aadan inuu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid in dhamaantood ay yihiin warar been abuur ah ee aan jirin, isaga oo muujiyay dareen cadho leh kadib markii lagu soo qaaday magaca kooxda Los Blancos.
Neymar ayaa markii ugu horeysay muujiyay dareen cadho kadib markii dib loo xusuusiyay kulankii ay Brazil 7-1 kaga badisay Germany Koobkii Adduunka ee 2014. Taasoo la mid ah guushii ay xalay Champions League-ga kooxda Celtic wuxuuna kaga jawaabay: “Marwalba waxaad xasuusataan wixii maalinkaa dhacay, marna ma joojineysaan inaad arintan ka hadashaan, waxaan kaliya ku faraxsanahay waxa kooxdayda ay ka sameeyeen kulanka Celtic, waan ku farxsanahay guushii aan gaadhnay taas ayaana muhiim ah”.
Xidiga ree Brazil ayaa intaa kadib ka hadlay wararka isaga shaqsi ahaan ku aadan wuxuuna yidhi: “Dadka inta badan waxay doonayaan ka hadalka wararka aan wanaagsaneyn, waxayna sidoo kale jecel yihiin in mudo fog ay kasii hadlaan”.
Kahor inta aan la weydiin wax ku saabsan Real Madrid ayaa wuxuu ka dhawaajiyay Neymar xidiga kooxda PSG: “Waxaa jira warar aan wanaagsaneen ay shaqsiyaad qaar ay doonayaan inay sii joogteeyaan ka hadalkiisa, waana waxaan wanaagsaneyn”.